Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKWIKWỌ ASIAN Ndị na-egwu bọọlụ Turkish Cengiz N'okpuru Storymụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
Ihe omuma anyi nke Cengiz N'okpuru na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezin'ulo ya, nwunye ya, ugbo ala ya, uru ya, ndu ya na ndu onwe onye.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, anyị na-ewetara gị nkọwa zuru oke nke Bio ya, site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Tupu nke ahụ, ka anyị gosi gị nchịkọta nkenke nke akụkọ ndụ ya.
Nke mbu, ikekwe ị maghị na ọ bụ onye Turkey. Gị, ọ bụghị onye a ma ama dị ka otu n'ime obodo ukwu ya- Arda Turan, naanị mmadụ ole na ole n'ime ndị gụrụ ya gụrụ Memoir ya. N'egbughị oge, ka anyị bido n'akụkọ gbasara mmalite ndụ ya.
Giorgio Chiellini Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Cengiz N'okpuru Storymụaka Akụkọ:
Maka Biography Starters, N'okpuru Cengiz a mụrụ na 14th ụbọchị nke July 1997 nne ya, Fatma Under na nna, Hasan Under, n'obodo Sindirgi, Turkey. Onye na - agba ọsọ bọọlụ bụ onye izizi n’ime ụmụaka abụọ amụrụ site na njikọ dị n’etiti ndị mụrụ ya gosipụtara na ha dị na 50 na oge ederede.
Site n'oge, Cengiz na-egosi mmasị n'ịgba bọọlụ. Ọ malitere mgbe ọ dị afọ ise mgbe ọ hụrụ ka obodo ya na-edekọ akụkọ ihe mere eme nke iru 2002 FIFA World Cup ọkara-ikpeazụ. Ọ bụ ezie na Turkey ji nchara ọla kọpa n'asọmpi ahụ, Cengiz nwere ezigbo mkpali igwu mba ya otu ụbọchị.
Edin Dzeko Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu na-enweghị isi
Dika nwatakiri Turk toro okenye, otu a ka ịhụnanya ya na-enweghị atụ maka football si eto. Nke ahụ pụtara na afọ 5 abanyeghị na njem egwuregwu bọọlụ na mberede. Kama nke ahụ, nkwenye ya zuru oke iji mee ka obodo ya dị mpako dugara ya n'ịhọrọ bọọlụ karịa ihe ọ bụla.
Cengiz N'okpuru Mụrụ Ezinụlọ:
Dị ka amaara Turkey maka iguzosi ike n'ihe ya nye okpukpe, otu a ka Cengiz si zụlite na Ala Ala Ezinụlọ. Na mbido, ndị nne na nna Cengiz Under nne na nna hụrụ na o nyefere onwe ya kpam kpam n'oge ekpere ya kwa ụbọchị.
Gabriel Batistuta Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Na-atọ ọchị, Cengiz na-agbakarị n'okporo ámá iji soro ndị enyi ya gbaa bọl mgbe Asr gasịrị (ekpere ehihie ndị Alakụba). Ikekwe nraranye ya na ọchịchọ ikpe ekpere tupu ọ gawa n'ọhịa ahụ emeela ka ọ nwee ihe ịga nke ọma na ọrụ ụbọchị ikpeazụ ya. Anyị agaghị enwe ike ijide n'aka na nke ahụ agaghị adị!
Cengiz N'okpuru Ezinụlọ:
Nchọpụta gosiri na mba onye ahụ bụ Turkey. Agbanyeghị, anyị ma na ị nwere ike jụọ; Ebee ka o si?… Ikekwe Japan ma ọ bụ China. Na-ekpe ikpe site na anya ya, ezinụlọ Cengiz Under nwere ike inwe agbụrụ ezinụlọ ha site n'elu ma ọ bụ onye ọ bụla nke mba ndị Eshia.
Danny Drinkwater Childhood Story Plus Na-agbaghasị akụkọ ndụ
Nyocha banyere ebe amụrụ onye Turkey (Sindirgi) na-egosi na obodo a bụ ógbè Balikesir na mpaghara Marmara nke Turkey. O doro anya na a maara ógbè ahụ maka mmanụ na-esi ísì ụtọ, Kolonya.
Cengiz N'okpuru Football Akụkọ:
N'ịbụ onye tolitere na Sindirgi, nwatakịrị ahụ enweghị ike ịkọwa na football. N'oge ahụ, ọ na-emecha ọrụ ya ngwa ngwa mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ wee gbaga soro ndị enyi ya gbaa bọl. Nke nta nke nta, Cengiz hụrụ na ọ na-elekwasị anya n'ịgba bọl karịa ọrụ agụmakwụkwọ. Zute ndị enyi ụmụaka Cengiz na ndị otu egwuregwu bọọlụ laa azụ n'ụbọchị.
Mgbe ọ dị afọ iri, ndị mụrụ ya ji amamihe chọọ ụlọ akwụkwọ mmuta dị ọnụ ala iji debanye aha nwa ha nwoke. Na ihu ọma, ha sụrụ ngọngọ gafee Bucaspor Football Academy, nke emepere ọhụụ banyere oge ahụ. Ha debanyere aha Cengiz na ụlọ akwụkwọ bọl na afọ 2007. Lee, ọkacha mmasị gị N'okpuru ka ọ pụtara ihe dị ntakịrị na agụmakwụkwọ football mbụ ya.
Harvey Barnes Akụkọ gbasara nwatakịrị gbakwunyere Eziokwu Biography
Oge Ndụ Ahụike:
Banye na agụmakwụkwọ Bucaspor dị ka nrọ nke mezuru maka nwata Turk nke na-ahụkarị bọọlụ dịka nri ya kwa ụbọchị. Ka oge na-aga, Cengiz ghọtara na ọ dị ya mkpa ịrụ ọrụ dị egwu iji dekọọ mmeri na njem njem bọọlụ ya.
Ruo afọ isii, nwatakịrị ahụ nọgidere na-ewuli ume ya ma melite nkà ya n'etiti ndị ọzọ na-eto eto talent nke agụmakwụkwọ ya. Mgbe ọ nọ na nke ahụ, ndị nne na nna Cengiz Under nọ na-achọ ụlọ akwụkwọ egwuregwu ka mma nke ga-enyere ya aka ịbawanye pọtụfoliyo bọọlụ ya.
N'ụzọ dị mma, na 2013, nna ya mere ka o tinye akwụkwọ maka ule na Altinordu football club nke ọ gafere na agba agba. Nke a bụ nchịkọta nke mmalite dị umeala n'obi ya na Altinordu football club.
Cengiz N'okpuru Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Dika Future Star jiri ndidi zuo ike n'etiti ndi otu ndi otu ya, ya mere o jiri nwayọ nweta oge iji gosiputa uzo egwu ya. N'ụzọ dị mwute, a matara ya maka ịgba ọsọ football ya ma kpọọ ya ka ọ kpọọ maka ndị U-18 nke Turkey.
Mgbe o mechara ọhụụ isii wee tụlee otu ihe mgbaru ọsọ maka ndị otu U-18 nke obodo ya, a buliri Cengiz na ndị otu U-19. N'ime otu oge ahụ na 2014, onye ọkpụkpọ Turkey abanyekwara na Altinordu ndị otu egwuregwu, nke gosipụtara mmalite nke ọrụ aka ya na football football. Nke a bụ ọhụụ na arụmọrụ ya maka ndị otu egwuregwu isi nke Altinordu.
Bojan Krkic Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Cengiz N'okpuru Biography - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Nwere ike ịkọ nkọ banyere ihu nne na nna ya mgbe akụkọ banyere nwa ha nwoke na ọ bụ ọkachamara ruru ha aka. N'oge ahụ, Cengiz kpebisiri ike idekọ ụbọchị otuto nke ga-enye ezinụlọ ya ọ joyụ.
N'ihi ya, ọ kwagara Istanbul Basaksehir na 2016 wee kwado onwe ya dị ka otu n'ime ndị egwuregwu kachasị baa uru na Turkey ọkachamara League (Super Lig). Izute nwa-nwoke-gbanwee-nwoke onye meere onwe ya aha mgbe ọ na-egwu maka Istanbul Basaksehir na Turkish League.
Obere oge abụọ na klọb ọhụrụ ya, Fortune chọtara Cengiz ka ọ na-emechi nkwekọrịta nkwekọrịta nke € 13.4 nde na Rome na July 2017. N'ihi ekele ọ nwere na ịkụ, Turk nwetara ihe mgbaru ọsọ na mmalite nke Champions League. N'ihi ya, ọ ghọrọ onye ọkpụkpọ Turkish nke ọdụdụ akara na asọmpi ahụ.
Emerson Palmieri Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Biography
Obi abụọ adịghị ya, ọ ghọrọ onye a ma ama site na isonyere AS Roma na 2017. Ọbụna onye a ma ama karịa mgbe o meriri 2018 Turkish Footballer of the Year Awards.
Ọganihu ọsọ ọsọ n'oge edere Bio a, Cengiz esonyela Caglar Soyuncu na Leicester City - na oge ịgbazinye oge iji họrọ nnyefe na-adịgide adịgide. Soccer Fans nwere olile anya na ọrụ Bekee ya agaghị aga ụzọ nke Chenk Tosun, onye obodo ibe ya nke na-atọghị ụtọ na mba ahụ. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Cengiz N'okpuru Ndụ Ndụ:
Nke kachasị, anyị enweghị ike ịgbagha eziokwu ahụ bụ na ọmarịcha mma ya ga-adọta ụmụ nwanyị nwanyị ga-ele onwe ha anya dị ka ndị enyi nwanyị na nwunye. Otú ọ dị, onye ọkpụkpọ Turkey ahụ edebela mmekọrịta mmekọrịta ya na nzuzo.
Na agbanyeghị, anyị ahụla ya ka ọ biputere onyonyo ụmụ nwanyị abụọ dị iche iche na-achị ọchị n'akụkụ ya na peeji nke Instagram. N'ihi ya, anyị nyochara foto ndị ahụ wee chọpụta na ọ gbalịsiri ike ime ka ihu ụmụ nwanyị ahụ ghara ịma. Nke a mere ka anyị jụọ naanị otu ajụjụ; Otu n'ime ha ọ nwere ike ịbụ Cengiz Under's Girlfriend ma ọ bụ bụrụ nwunye?
Cengiz N'okpuru Ndụ Onwe Onye:
Ewezuga ọrụ ya n'ọhịa, ndị Turk dị jụụ ma nabata ya. Cengiz bụ onye nwere ike imeghari n ’ụdị ike ọ bụla gbara ya gburugburu. O nwere nnukwu mkpa a iji nọrọ naanị ya, ma ọ bụ na nso mmiri ma wezuga ihe nile, iji weghachi ike ime ya.
Cengiz N'okpuru Web:
N'ịbụ onye kpakpando bọlbụ kachasị elu, o nweela akụnụba zuru oke nke ga-enye ya ụdị ndụ okomoko. Eziokwu bụ, ọ naghị ahụ ya ka ọ na-egosipụta ụdị okomoko a.
A na - enye kpakpando Rom onyinye ohuru Volvo XC40 ohuru mgbe emechara ya ọkpụkpọ kacha mma nke ọnwa na February 2018.
Ị maara?… Volvo enweghị mmesapụ aka iji nye Cengiz ikike zuru oke n'ụgbọala n'ihi na ọ ga-abụ onye nwe ya rue mgbe a ga-eme ntuli aka nke ọnwa ọzọ. Gbọ ala Volvo dabara ya na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ọ kwụsị ịzụta ụdị ihe atụ a- onye maara?
N'ikpeazụ, ịnwe mmadụ nke àgwà zodiac Cancer pụtara na onye ọkpụkpọ Turkey ga-egosipụta njirimara nchekwa onwe onye na nchekwa nchebe. N'ihi ya, ọ chọghị igosipụta ụlọ ya ndị mara mma na ụgbọala ndị mara mma n'ihu ọha.
Cengiz N'okpuru Net Worth:
Egwuru egwu dị iche iche na klọb ọkachamara na-ebute nnukwu ego maka Cengiz. Ya mere, o nwere atụmatụ Net ruru £ 3.6 Nde n'oge edere Bio.
Cengiz N'okpuru Ihe Omume:
Ọ hụrụ igwu mmiri. Imirikiti oge, N'okpuru na-enweta obi ụtọ site na ịdebe foto nke onwe ya na ọdọ mmiri. Ikekwe, ọ gaara eme ka onye na-egwu mmiri n'egwuregwu Olimpik ma ọ bụrụ na football anaghị arụ ọrụ.
Cengiz N'okpuru Ndụ Ezinụlọ:
N'ihi ọrụ ya, ọ na-anọnyere ezinụlọ ya naanị obere oge. Agbanyeghị, njikọ dị n'etiti ndị otu ezinụlọ Cengiz Under bụ nke a na-enweghị ike ịghọta aghọta.
Hụ otú nne na nna ya na nwanne ya nwanyị si sị ya gaa nke ọma ka ọ na-aga njem na-agbanwe ndụ na Rome (mgbe ọ sonyeere AS Roma) na 2017. Ugbu a ka anyị mata banyere nna ya, mama na ụmụnne ya.
Banyere Cengiz N'okpuru Nna:
Nna m bụ nnukwu ogidi nke mebere ụzọ dị egwu na ndụ ọrụ ya. Iji gwa gị eziokwu, nna Cengiz, Hasan Under, bụ nnukwu nwoke mezuru ọrụ nna ya nke ịchọpụta nwa amụrụ nwa. Ha abụọ dị ezigbo nso ka ị na-ahụ nwa Cengiz ka ọ na-atụkwasị obi na-abụghị nna, Hasan Under.
N'ihi obi amamịghe ya, Hasan Under na-aghọrọ ugbu a ọrụ nke ịrụsi ọrụ ike ya yana akụ na ụba nke nna ọhụụ. Know mara?… Hasan Under na-ekpegara nwa ya ekpere oge ọ bụla ọ gwara ndị nta akụkọ okwu. Nke a bụ ihe o kwuru n'okpukpe;
“Enwere m obi ụtọ maka nwa m nwoke. Chineke kwere ka o meghe uzo. Ka Allah nye gị ogologo ndụ na-enweghị ihe ọghọm.
Banyere Cengiz N'okpuru Nne:
Ihe ngosi ozo a ma ama nke kwadoro onye ọkpụkpọ Rome mbụ bụ nne ya, Fatma Under. Naanị ụmụ nwanyị nwere ike ịghọta ọkwa nke ịhụnanya na-enweghị atụ nke Fatma nwere n'ebe nwa ya nwoke nọ. N'ebe a, ọ na-ebe ákwá n'obi ya ka Cengiz na-ewe otu ezumike.
Laa azụ na 2017, mama Cengiz enweghị ike ịlụ ọgụ maka anya mmiri ya ka ọ na-agwa nwa ya nwoke okwu Rome. Chaị! Oge mmetụta obi ahụ oge niile ga-ahapụ ncheta na-adịgide adịgide n'uche National Star.
Banyere Cengiz N'okpuru ibmụnne:
Nwere ike ịtụle Cengiz onye ọkpụkpọ nwere obi ụtọ n'ihi na o nwere nwanne nwanyị ọmarịcha, Fatma Nur, onye bụ naanị nwanne. Dị nnọọ ka nne ya, nwanne nwanyị Cengiz, Fatma Nur, kwara ezigbo ákwá mgbe ọ hapụrụ Turkey gaa Rome. Ọ dị mma, ọ bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha na ezinụlọ Cengiz Under nwere njikọ nke mmụọ a siri ike. Nwanne nwanne nwanyị nwere nlekọta nwere. Lelee ka ọ na-agụ agụụ ugbu a.
Banyere Cengiz N'okpuru Ndị ikwu:
Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, nwanne nna na nwanne mama Cengiz emetụtala ihe ịga nke ọma ya ma ọ bụ n'ụzọ na-apụtachaghị ìhè. Ọ bụghị naanị nke ahụ, mana ụmụ nwanne nne ya na ndị ikwu ya ndị ọzọ nwere obi ụtọ inwe onye dị ka ya n’ezinụlọ ha. Ọ bụrụ na nna nna ya na nne nne ya ka dị ndụ, ha ga-eme ọfụma maka mmezu ya.
Cengiz n'okpuru Eziokwu efu:
Iji kechie Biography anyị, ebe a bụ eziokwu ole na ole ga - enyere gị aka ịmatacha akụkọ ndụ ya.
Eziokwu nke 1: Cengiz n'okpuru ụgwọ ọnwa na ego kwa sekọnd:
Inweta na Pound (£)
Kwa Afọ £ 4,466,154
kwa ọnwa £ 372,180
Kwa Izu £ 85,756
Kwa .bọchị £ 12,251
Kwa elekere £ 510
Kwa Nkeji £ 8.5
Kwa nke abụọ £ 0.14
Anyị enyochapụtala ego ọ na-akpata dị ka elekere na-akụ. Biko, lee ụgwọ ọnwa ya kwa nkeji ma hụ ego ole ọ ritere kemgbe ị bịara ebe a.
Kemgbe i mepere Cengiz Under's Biography Akụkọ, nke a bụ ihe ọ kpatara…
Eziokwu nke 2: Cengiz N'okpuru Okpukpe:
Beingmụrụ na obodo nke 99.8% Muslim bụ ezigbo ihe kpatara itolite na nkwenkwe Alakụba. Ndị nne na nna Cengiz N'okpuru bụ ndị Alakụba ji obi ha niile na-atụle ọrụ okpukpe ha karịa usoro ihe omume ndị ọzọ niile. N'ihi ya, ndị na-egwu bọọlụ na nwanne ya nwanyị zụlitere n'okwukwe ndị Alakụba.
Eziokwu nke 3: Ụlọ ọmarịcha ụlọ:
Omume Cengiz Under nke ụwa mere ka ọtụtụ ụmụaka nwee ike ịba bọọlụ. … Obodo Cengiz Sindirgi kwenyere na ya nwere ike tupu ya ebili na AS Roma.
N'oge ezumike ya na June 2017, Onye isi obodo Sindirgi, Ekrem Yavas, nyere ya ihe osise na-egosi mmalite mmalite ya. Kwere m mgbe m gwara gị na foto a ghọrọ otu n'ime ọtụtụ mkpali nke kpara Cengiz Life Story.
Eziokwu nke 4: Esemokwu:
Know maara? Biggest isi okwu dị na Cengiz Under's Biography bụ ememme mgbaru ọsọ ndị agha ya. Na February 2018, Cengiz kelere ya mgbe o nyesịrị ihe mgbaru ọsọ megide Benevento.
Fans mere ihe a pụtara ịsọpụrụ ndị agha Turkey, ndị rụrụ ọrụ na Northern Syria. N'ezie, ọtụtụ ndị Fans jụrụ omume ya wee katọọ ya. Lee esemokwu foto nke Cengiz N'okpuru.
Eziokwu nke 5: Ihe ọ dị ka FIFA:
Dabere na nyocha anyị site na FIFA ogo, Cengiz Under bụ n'ezie ndị na-abụghị Caglar Soyuncu dị ka ọ na-enweghị ọtụtụ ihe na anụ ahụ na agbachitere. O doro anya na ọ na-atọ ya ụtọ ịwakpo, nkà, mmegharị na ike.
Eziokwu nke 6: Mmekọrịta Cengiz N'okpuru na Onye Mmekọ:
Mgbe emechara akụkọ banyere azụmahịa ya na Leicester City, WWE lara ezumike nká, The Undertaker nwere ọ overụ nke ukwuu ma mesịa bụrụ onye na-akwado ụlọ ọgbakọ England. Wouldnye gaara ekwenye na Onye Nwụrụ Anwụ nwere mmasị na ikiri bọl?
Maka nghọta ngwa ngwa nke Cengiz Under's Biography, nke a bụ tebụl nke na-agbagha eziokwu banyere ya.
Azịza nke Wiki:
Aha n'uju: N'okpuru Cengiz
Aha Nick: Onye Turkish Dybala
Ụbọchị ọmụmụ: 14th July 1997
Ebe amụrụ onye: Sindirgi, Turkey
Nna: Hasan N'okpuru
Nne: Fatma N'okpuru
Ụmụnne: Fatma Nur (nwanne nwanyị)
Ezigbo Net: 3.6 Nde
Rygwọ ọnwa kwa afọ: £ 4,466,154
Ahịa ahịa: Million 21 nde (dika nke 2020)
Ihe omume: igwu
Ọkachamara: Player Player
elu: 1.73m (na mita) na 5 ′ 8 ″ (na ụkwụ)
N'ikpeazụ, Cengiz Under's Biography na-egosi na anyị nwere ike iru oke nke nrọ anyị ebe ọ bụla anyị hụrụ onwe anyị. Dị ka onye ọkpụkpọ Turkish, anyị nwere ike ịhapụ mpaghara nkasi obi anyị (ụlọ) maka ịchụso ọrụ anyị na-achọkarị iru.
Ka anyị chetakwa na ndị anyị hụrụ n’anya (ma ọ bụ nne na nna, ụmụnne ma ọ bụ ndị enyi) na-eche anyị oge niile. Anyị kwesịrị ime ka ha dị mpako dịka nne na nna na ndị ezinụlọ Cengiz nọ.
Anyị na-atụ anya na Premier League (EPL) bụrụ ihe dị mma nye Cengiz ka ọ na-enyocha ike ya na Brendan Rodgers ' Obodo Leicester.
Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Cengiz Under's Bio. Ọ bụrụ na ịchọta ihe ọ bụla nke na-adịghị ka ọ dị mma na edemede anyị, jiri nwayọ tinye okwu gị ma ọ bụ gwa anyị ihe ị chere maka Ndụ Ndụ ya.
Wesley Fofana Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Dennis Praet Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Akụkọ banyere nwata nke Kasper Schmeichel gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Ricardo Pereira Akụkọ nwata na gbakwunyere ihe ndị ọzọ gbasara akụkọ banyere ndụ ha
Ifiedbọchị agbanwee: November 7, 2020